Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး - Gold Channel
Best Myanmar Subtitled Movies
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီတစ်ပတ် Box Office ရဲ့ ဝင်ငွေအများဆုံးနံပါတ်တစ်နေရာက Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children ဇာတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ Jake Portmen ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွေထဲကလို ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ အံ့သြထိတ်လန့်စရာ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ တကယ်အစစ်အမှန်ဘဝလို့ထင်ရတဲ့ စိတ်နယ်လွန်လောကထဲကို ရောက်သွားတဲ့ဇာတ်လမ်းပါ။
သူဟာ ထူးဆန်းတဲ့စွမ်းအားတွေရှိတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ရပြီး အဲဒီကောင်မလေး ရဲ့ အိမ်ကို ရောက်ရှိသွားကာ တစ်မူထူးခြားပြီး မနှစ်မြို့ချင်စရာကောင်းလှတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအိမ်ကြီးထဲရောက်သွားတဲ့ Jake ဟာ သူ့အတွက် အန္တရာယ်တွေ ပိုပိုပြီး ကြုံလာရတဲ့အခါ သူ ဘယ်လို ပြန်လည်ခုခံကျော်လွှားမလဲဆိုတာကတော့....
မြင်နေတွေ့နေကျ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေကနေ ခွဲထွက်ထားသလို၊ ဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းကိစ္စတွေကို ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ Tim Burton ရိုက်ကူးပြီး လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဒီဇာတ်ကားဟာ Trailer ကြည့်ရုံနဲ့တင် တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါပြီ။
စတင်ပြီး ရုံတင်ချိန် စက်တင်ဘာ ၃၀ ကစလို့ ဒီနေ့အထိ စုစုပေါင်းဝင်ငွေ ၂၈.၉ သန်းအထိ ရရှိခဲ့တဲ့ ဒီ Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children ဇာတ်ကားဟာ Box Office ရဲ့ ပထမနေရာမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရုံတင်ရင်တော့ Horror ဇာတ်လမ်းကြိုက်သူတွေ၊ လျှို့ဝှက်သည်းဖို ကြိုက်သူတွေ ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဆိုတာ ညွှန်းလိုက်ပါရစေ...
Miss Alma LeFay Perigrine အဖြစ် Eva Green
Jake Portman အဖြစ် အသက် ၁၉ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ Asa Butterfield
Ella Purnell အဖြစ် Emma Bloom
Barron အဖြစ် Samuel L. Jackson
Miss Avocet အဖြစ် Judi Dench
Ornithologist အဖြစ် Rupert Everett တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး တခြားသရုပ်ဆောင်များစွာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
Credit to- Sky Land News & Media
Quality : 720 HDRIP translate by: ChueThinzar Naing
encode by Hein Min Htet
Download 900 MB
Download 350 MB
6 November 2016 at 00:48
လုံးဝအကြည်လား ခင်ဗျာ။ဖုန်းဘေအကုန်ခံပြီးဒေါင်းရမှာမို့့လို့့ပါ
6 November 2016 at 07:44
6 November 2016 at 09:38
link ပျက်နေပါတယ် Reply
6 November 2016 at 11:23
This link is deleted by the owner.စာတန်းကြီးပေါ်နေပါတယ်....
6 November 2016 at 13:16
ယခုလိုပြန်ပြင်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ဆွဲလို့ ရသွားပါပြီ
6 November 2016 at 20:39
ထစ်နေတယ် ကြည့်နေရင်ထစ်ထစ်သွားတယ်ပြီးရင်ပြန်ကောင်းတယ် player တွေလည်းစုံနေတယ်
zin min ko
6 November 2016 at 22:39
This link is deleted by the owner. လို့ပေါ်နေတယ် လင့်လေးပြန်တင်ပေးပါအုံး ကျေးဇူးပါ
7 November 2016 at 10:15
This link is deleted by the owner.pcloud dl 900mb
8 November 2016 at 08:47
link ပျက်နေပာတယ် ခင်ဗျာ
8 November 2016 at 11:11
link delete phit ny tl bro doe
8 November 2016 at 15:24
10 November 2016 at 15:22
"This link is delete by owner"Is appearing please reslove this problem please admit တို့
14 November 2016 at 22:15
Link delete phyit nay tal bya bal lo lout ya ma lal kha bya
3 December 2016 at 23:16
Link deleted by owner ဖြစ်နေပါတယ်
Mom's Friend (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
၁၈+ ကို ဇါတ်လမ်းလေးနဲ့ မှ ကြည့်ရတာအရသာရှိတာလို့ ဆိုစမှတ်ပြုကြတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေအတွက် နည်းနည်း ကြက်သီးမွှေးညင်းလေး ထရုံလေး ကောင်းမွန်တဲ့ Movi...
The K2 (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး The K2 (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး တောင်ကိုရီးယား တစ်နိုင်ငံလုံးနီးပါးကို ကွန်ရက်ဖြန့်ကြက်ထားသည့် tvN ရုပ်သံလိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ T...
Ice Fantasy (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Ice Fantasy (2016)မြန်မာစာတန်းထိုး =========================== Ice Fantasy ဇာတ်လမ်းတွဲ တွင် တောင်ကိုရီးယား၏ ကြယ်ပွင့်တစ်ခုဖြစ်သော ကင်ဟ...
The Founding Of A Republic (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
တဖွဖွတောင်းဆိုလွန်းကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းကို အခြေပြုရိုက်ကူးထားတဲ့ တရုတ်သမိုင်းဝင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကားကို...
Miss Teacher (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
18+ဇာတ်လမ်းဆန်းဆန်းလေးတွေ တောင့်တနေတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် India 2016 ဇာတ်ကားတစ်ကား Gold Channel ချစ်သူတွေအတွက် တင်ဆက်ပါရစေ..။ Rose Dey သည...
The Babysitter (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
Imdb 5.7/10 မင်္ဂလာပါ၊ ငွေကြေးရဲ့ ကျေးကျွန်အဖြစ် ရုန်းကန်နေရတဲ့ ယနေ့ခေတ်လူတွေအကြားမှာ... လိုအင်ဆန္ဒတိုင်းကိုသာ ချုပ်တည်းမထားနိုင်ရင်ဖြင့် အ...
ဒီတစ်ပတ် Box Office ရဲ့ ဝင်ငွေအများဆုံးနံပါတ်တစ်နေရာက Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children ဇာတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ဒီဇာတ်က...
ကဲ GC ပရိသတ်ကြီးရေ.. အခုနောက်ထပ် Korean Seriesးလေးတစ်ခု တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင့် ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အသည်းကျော်မင်းသားလေး W- Two worlds ကမင်း...
Yong Pal (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
2015 august 5ကစထွက်ခဲ့ပြီး the gang doctorဆိုပြီးလူသိများခဲ့တဲ့ yong pal ကားကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြပါရစေ။ yong palဟာ 2015ခုနစ်k...
Copyright © 2011. Gold Channel - All Rights Reserved